“Soomaalidu uma ogola gabdhahooda in ay dhexgalaan dhalinyarada Swedishka” | Somaliska
Mid ka mid ah siyaasiyiinta xisbiga bidixda ee kamuunka Nässjö ayaa sheegay in uu aasaasayo urur dhalinyaro oo ka shaqeeya isdhexgalka dhalinyarada Soomaalida iyo kuwa Swedishka. Ninkaan oo lagu magacaabo Alexander Lowejko ayaa hada maamule ka ah qeybta isdhexgalka (integrationsenhet) ee kamuunka Nässjö.
Mar uu ka hadlaayay sababta ka dambaysa fikradiisa, ayuu warbaahinta u sheegay in dhalinyaro badan oo Soomaali ah lala mideeyay waalidkooda balse aysan xiriir fiican la lahayn dhalinyarada Swedishka. Sababta ayuu ku sheegay in inta badan aysan waalidiinta soomaalidu u ogoleyn caruurtooda in ay dhexgalaan Swedishka. Isagoo intaas ku daray in qaasatan gabdhaha aan loo ogolayn in ay dhexgalaan Swedish badan, qofkii isku daya in uu sidaas sameeyana uu la kulmi karo ciqaab badan.
Hadalka ninkaan ayaa u muuqda mid jaa’ifo ku ah guud ahaan Soomaalida, isagoo doonaya in uu mashruuc ku raadsado hadalada qaladka ah ee uu ka faafinayo Soomaalida. Inkastoo ay saxtahay in waalidiinta Soomaalidu aysan doonayn in gabdhahooda ay dhexgalaan wiilasha Swedishka ee ajanbiga ka ah. Balse waxaa la ogyahay in waalidiinta Swedishka laftooda aysan doonayn in caruurtooda ay dhexgalaan soo galootiga, iyadoo ay marar badan dhacday in waalidiinta Swedishku ay ka guuraan xaafadaha ay ku soo bataan soo galootiga iyo in ay iskuulada ka badashaan ay caruurta soo galootigu ku soo badato.
ASc Walaal Jimcaale aad baad u mahadsan tahay Illaah kasokow.
Arrinkaan wuxuu kamid yahay waxyaabha aad loo buunbuuniyo oo lagu doonayo in wax loogu dhimo dadka soomaaliyeed.
Dadka ka danbeeyana ma´aha dad shisheeye ee waa soomaalida gudaheeda weliba waa dad aad u yar.
Weli intaan joogay Sweden ma arag waallid dhahaya caruurtiisa haddii aad Swedesh la saaxibtid ciqaab adag ayaan ku marinaya, caruurteena iyo swedheshkuna meel walba ayeey isla joogaan Iskuulaadka,goobaha cayaaraha iwm.
Hadalkii oo kooban waa Mashruuc lagu doonayo lacag oo loo biyey magaca,,,,,,,,Asc
asc walaala yaal waxan uu sheegay waa sax mana rabno in ey la saaxiibaan ilma heena ilma heysta diin kale ama cadaan ha noqdeen ama madow ha noqdeen mana ka wadno midab sooc ee waxaan ka wadnaa diin sooc mida kale gabar muslim ah looma ogola in ey wiilal dhex gasho waxey doonaan ha noqdaanee aniga wexey ila tahay ninka warkan ka soo yeeray in uu dana gaar ah ka leeyahay ama ey aqoonta diimaha ku yartahay